Avelan'i Apple handefa ny streaming WWDC | Avy amin'ny mac aho
Avelan'i Apple hivezivezy mivantana WWDC 2015 i Apple amin'ny farany
Ny mpikarakara ny AltConf dia namaha ny fifanolanana ara-dalàna nifanaovany tamin'i Apple, ary izao dia afaka mandefa ny WWDC 2015 amin'ity taona ity, noho izany ho fantsona hafa. AltConf nanambara, izany tsy handefa izany indray Keynote WWDC 2015, noho ny fampandrenesana ara-dalàna avy amin'i Apple. Soa ihany ho an'ireo mpamorona, ny mpikarakara AltConf dia afaka nanao fifanarahana tamin'i Apple.
AltConf dia a safidy ho an'ny mpamoronaHo an'ny WWDC tamin'ity taona ity dia tsy nanam-bintana nahazo ny pasany izy ireo, tamin'ny fihaonambe natao tany San Francisco isan-taona. mpikarakara nalefan'izy ireo maimaimpoana ny hetsika, WWDC sy ireo fotoam-pivoriana hafa, ho hitan'ny mpamorona ny hetsika.
Faly be izahay fa afaka mamaha an'ity olana ity amin'ny Apple, ho tombontsoan'ny vondrom-piarahamonina mpamorona. Io no tsara indrindra ho an'ny rehetra voakasik'izany, ary manantena izahay ny hanampy atiny mamirapiratra, toy ny nataon'i Apple amin'ny WWDC 2015, hoy i Elkin.
Misy fihemorana kely eo anelanelan'ny Apple sy AltConf, ny fifanarahana dia mamela ity farany ihany, nandefa indray ny hevi-dehibe WWDC y ny satan'ireo fivoriana an'ny mpamorona mitsidika ny kaonferansa anao. Midika izany fa AltConf tsy ho afaka handefa indray ny seho an'ny mpamorona tsirairay, natao tao amin'ny WWDC tamin'ity taona ity.
Na izany aza, mbola mahafinaritra ny mahafantatra fa Apple, mamela an'i AltConf handefa farafaharatsiny, ny sasany amin'ireo fotoam-pivoriany ho an'ny mpamorona izay hanatrika ny fihaonambe ho an'ny mpamorona, manome ireo mpamorona iOS toa ahy zahao ity hetsika ity. Mihainoa amin'ny pejinay, hahafantarana ny zava-drehetra mifandraika amin'ny Keynote amin'ity alatsinainy ity, ary aza adino na inona na inona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Avelan'i Apple hivezivezy mivantana WWDC 2015 i Apple amin'ny farany
Sony Music CEO dia nanamafy ny 'Apple Music' hisongadina ao amin'ny WWDC 2015
Hamoaka rahampitso ve ny Apple Music? Ianaro ny serivisy fandefasana mozika vaovao an'i Apple